प्रशन्नले ल्याए गाउँलेको इन्टरडक्शन !(भिडियोसहित) – Akhabar Today
प्रशन्नले ल्याए गाउँलेको इन्टरडक्शन !(भिडियोसहित)
काठमाडौं, २५ मंसिर । प्रशन्न रिमाल सुरुमा यु–ट्युबरका रुपमा चिनिएका थिए । तर, अहिले उनको परिचय बदलिएको छ अर्थात प्रशन्नले एकपछि अर्को र्यापर भिडियो सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । त्यसैले उनलाई हिजोआज र्याप गीतका निर्देशकसमेत भन्न थालिएको छ ।
यिनै प्रशन्नले पछिल्लोपटक नवर्यापर किसन गिरि ‘गाउँले’को एउटा -याप गीतको भिडियो निर्देशन गरेका छन्, जुन भिडियो हालै रिलिज भएको छ । थुपै्र नवर्यापरका गीतको भिडियो बनाएर आफूमात्र नभएर गायकहरुलाई समेत चर्चामा ल्याएका प्रशन्नले गाउँलेको परिचयात्मक ईन्ट्रो र्याप गीतको भिडियो बनाएका छन् । उक्त गीतको शब्दहरु निकै खदिला छन् । उक्त गीतमा गिरि अर्थात गाउँलैकै शब्द रचना रहेको छ । जसमा उनले आफ्नो परिचय दिएका छन् ।
नेपालगञ्ज, बाँकेका गिरिले गीतमा आफ्नो ठाँउलाई समेत समेटेका छन् । एमएमएस ईन्टरटेनमेन्टको युटुब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको गीतको भिडियोमा डम्बर राईको सिनेमाटोग्राफी र प्रशन्न रिमालको निर्देशन रहेको छ । यस गीतलाई विषम आचार्यले एरेन्ज र टेकेन्द्र शाहको सम्पादन तथा कलरिङ रहेको छ ।